Sida loo nadiifiyo dhegaha eyga: wax kasta oo aad u baahan tahay | Eeyaha Adduunka
Encarni Arcoya | 05/10/2021 15:17 | Cudurada
Lahaanshaha eygu waxay muujineysaa mas'uuliyad maadaama aysan ahayn kaliya inaad ku raaxaysato wanaagga, laakiin sidoo kale inaad daryeesho baahiyaha uu xayawaankaagu qabo. Hawlaha sida maydhashada, u qaadidda dhakhtarka xoolaha ama ogaanshaha sida loo nadiifiyo dhegaha eyga aad bay muhiim u yihiin maadaama ay ka hortagi karaan dhibaatooyinka caafimaad.
Sababtaas awgeed waxaan rabnaa inaan kaa caawino inaad ogaato sida loo nadiifiyo dhegaha eyga. Halkan waxaad ka heli doontaa hage dhammaystiran si aad u fuliso daryeelkan toddobaadlaha ah. Ma shaqada ayaan u dhaadhacnaa?
1 Waa maxay sababta aad u fiirinayso dhegaha eygaaga
2 Sida loo nadiifiyo dhegaha eyga
2.1 Waxyaabaha lagama maarmaanka ah
2.2 Inta jeer ee nadiifinta dhegaha
2.3 Tallaabooyinka lagu nadiifiyo dhegaha eyga
3 Sida looga hortago dhibaatooyinka dhegaha eeyaha
4 Astaamaha lagu garto in eeygaagu leeyahay otitis
Waa maxay sababta aad u fiirinayso dhegaha eygaaga
Haddii aadan ogeyn, dhegaha eygu waa mid ka mid ah qaybaha ugu xasaasisan xayawaankan. Taasina waxay ka dhigaysaa meel ay caabuqyada kugu soo geli karaan. Haddii aadan daryeelin, aakhirka waxaad la kulmi kartaa otitis soo noqnoqda, dhibaatooyin maqal, lumis maqal, ama xitaa ka sii daran, maadaama infekshanku ku faafi karo qaybaha kale ee jirkaaga.
Kormeerka xilliyeed, iyo sidoo kale nadiifinta, aad bay muhiim u tahay waana inay ahaataa bishii dhawr jeer la sameeyo si loo hubiyo inay fiican tahay. Maskaxda ku hay in eeyuhu aysan keligood nadiifin karin dhegaha, laakiin waxay u baahan yihiin caawinta milkiilaha.
Markaad daryeesho dhegaha eygaaga kaliya ma nadiifin doontid, laakiin sidoo kale waxaad ka fogaan doontaa dhibaatooyinka caafimaad, ama inaad u tagto dhakhtarka xoolaha.
Marka xigta waxaan rabnaa inaan kaaga tagno hage wax ku ool ah wax kasta oo ay tahay inaad tixgeliso sida loo nadiifiyo dhegaha eyga, laga bilaabo walxaha aad u baahan doonto ilaa tallaabooyinka ay tahay inaad qaaddo si aad u sameyso. Dabcan, maskaxda ku hay haddii aad aragto wax la yaab leh, waxa ugu fiican ee aad sameyn karto waa la tasho dhakhtarkaaga ka hor inta aysan dhibaatadu ka sii darin.
Nadiifiyaha MENFORSAN ee ...
Waxaan bilaabi doonnaa inaan kuu sheegno dhammaan waxyaabaha lagama maarmaanka u ah nadiifinta dhegaha eyga. Kuwani ma aha wax adag in la helo oo waxa ugu nabdoon ayaa ah inaad ku haysato gurigaaga.
Gaar ahaan, waxaan tixraacaynaa:
Nadiifiye dhegaha eeyaha. Tan waxaad ka heli kartaa dukaamada xayawaanka laakiin sidoo kale waxaad ka heli kartaa takhtarka xoolaha oo aad caadi ahaan aado.
Tuwaal nadiif ah.
Haddii eeygaagu weyn yahay, ama aad leedahay eey aad u deggan oo aan oggolayn in si fudud loo nadiifiyo, markaa waxa ugu fiican ee aad samayn karto waa tan hawsha u dhaxaysa laba qof si uu mid u qabto halka kan kalena gacanta ku hayo oo nadiifinayo dhegaha.
Ugu dambayntii, waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad hesho xoogaa dawooyin ah oo aad siiso ka dib markaad nadiifiso dhegaha eeyga sidii dawayn. Sidan ayaad ku baran doontaa waqti ka dib, haddii aad naftaada u oggolaato, inaad hadhow heli doonto wax aad aad u jeceshahay. Dabcan, ha iloobin in salaaxa ama waqti la qaadashadu ay sidoo kale noqon karto abaalmarin weyn.
Inta jeer ee nadiifinta dhegaha
Mid ka mid ah xogta ugu muhiimsan ee ay tahay inaad ogaato markaad nadiifinayso dhegaha eeyga waa soo noqnoqoshada. Taasi waa, imisa jeer ayaad u baahan tahay inaad nadiifiso si ay u caafimaad qabaan. Xaaladdan oo kale, jawaabtu uma fududa sidaad u malaynayso maxaa yeelay waxay inta badan ku xirnaan doontaa nooca eyga aad leedahay.
Sidaad ogtahay, waxaa jira noocyo badan oo eeyo ah, mid walbana wuxuu leeyahay astaamo u gaar ah. Xaaladdan, waxa ay tahay inaad maskaxda ku hayso waa, eyda leh dhego dhego dheer (kuwa daboola kanaalka dhegta) ayaa aad ugu nugul caabuqyada dhegaha.
Si kale haddii loo dhigo, eyda leh dhego dhaadheer oo barafoobay waxay u baahan yihiin nadiifin joogto ah oo ka badan kuwa leh dhegaha gaagaaban iyo kuwa rogman.
Iyo inta jeer ee la nadiifiyo? Markaas:
Haddii ay yihiin eeyo leh dhego gaagaaban oo fiiqan: 1-2 jeer bishii.
Haddii ay yihiin eeyo leh dhego dhaadheer oo foorara: 1-2 jeer toddobaadkii.
Iyada oo ku xidhan hab -nololeedka eeyga, soo noqnoqoshadaani way kala duwanaan kartaa, laakiin nadiifinta joogtada ahi waa muhiim si looga fogaado dhibaatooyin waaweyn oo ka jira kanaalka dhegta, gaar ahaan haddii ay yar tahay hawo -socodka ama qoyaanku ama qashinku ku ururaan.
Tallaabooyinka lagu nadiifiyo dhegaha eyga
Weligaa ma nadiifisay dhegaha eygaaga? Haboon waa taas samee maadaama ay tahay eey, si aad ula qabsanaysid inaad naftaada samaysato. Waa inaad ku bilowdaa inaad geyso meel uu ku dareemayo raaxo. Haddii aad aragto isaga oo walwalsan, waxaa laga yaabaa inay lagama maarmaan noqoto in qof kaa caawiyo si aad u qabato intaad baarayso oo nadiifinayso dhegta.
Qabso dhegta oo ku qabo suulka iyo farta dhexdooda. Sidan ayaad si fiican u fiirin kartaa gudaha dhegta oo fiiri haddii ay jiraan dheecaanno, ur xun ama guduudasho. Haddii aad aragto mid ka mid ah waxyaabahan, oo ay ku jiraan wax aad u badan, waxaa fiican inaad u tagto dhakhtarka xoolaha si aad u hubiso inaysan jirin dhibaatooyin ka sii daran.
Tallaabada xigta ee ay tahay inaad qaaddo waa inaad si tartiib ah dhegaha ugu nadiifiso suuf qoyan. Waxaad isticmaali kartaa serum si aad si fiican ugu nadiifiso. Dabcan, isku day inaadan gelin suuf aad u badan maxaa yeelay waxay iyaga u noqon doontaa wax aan fiicnayn. Kadib, geli caaradda nadiifiyaha eeyga oo ku dar xoogaa dareeraha ah. Si fiican u duug si uu uga gudbo kanaalka dhegta una furo dabka.
Waxa caadiga ah ayaa ah in eygu is ruxruxo, laakiin ka dib wuxuu isku dayaa inuu mar kale dhegta qabsado sidii bilowgii oo uu ka saaro xad -dhaafka suuf kale oo qoyan oo nadiif ah.
Tan waa in sidoo kale lagu sameeyaa dhegta kale.
Sida looga hortago dhibaatooyinka dhegaha eeyaha
Nadiifinta ka sokow, waxaa muhiim ah in laga hortago xaaladaha qaarkood oo kor u qaadi kara muuqaalka caabuqa dhegaha. Tusaale ahaan, the qoyaan, ama marka aad maydhaneyso ama haddii ay qoyso (roob ka imaado) maxaa yeelay tani waxay sababi kartaa bakteeriyada inay ku korto dhegaha.
Qodob kale oo xisaabta lagu darsadaa waa meydadka qalaad, taas oo keeni doonta xanaaq. Waxaan ka hadlaynaa boodh, dhir dhegta ku dhegta oo xoqda (ama ku dheg), iwm.
Timaha, maaddaama noocyada eyda qaarkood ay dheer yihiin badanaana waa la gooyaa, laakiin dhab ahaantii maahan kan ugu fiican maxaa yeelay timahaani waxay u dhaqmaan sidii caqabad ka soo horjeedda jirka shisheeye, qoyaan ...
Astaamaha lagu garto in eeygaagu leeyahay otitis
Oo sidee ku ogaan kartaa haddii eeygaagu qabo dhibaatooyin xagga maqalka ah? The otitis -ka ayaa badanaa, gaar ahaan xagaaga, oo ah marka aan aad u qoyanno. Sidaa darteed, ogaanshaha astaamaha ku gelin kara heeganka ayaa kaa caawin kara inaad wax qabato intaanay ka sii darin.
Waxaa ka mid ah ogeysiisyada aan leenahay:
Eygaagu ha ruxo wax ka badan inta caadiga ah.
Ha xoqdo ama ha xoqdo.
Haddii eeyga madaxaagu dhinac ka yahay.
Taasi waxay ka fogaanaysaa taabashada dhegta.
Ciriiri iyo ur xun.
Haddii aad dareento dhowr ka mid ah calaamadahan iyo inkasta oo aad dhegaha nadiifisay, waxa ugu fiican ee aad sameyn karto waa inaad u qaaddo dhakhtarka xoolaha si loo baaro.
Ma qabtaa su'aalo ku saabsan sida loo nadiifiyo dhegaha eyga?
Wadada buuxda ee maqaalka: Dunida eyga » Eeyaha Guud » Cudurada » Sida loo nadiifiyo dhegaha eyga